Lviv - Study in Ukraine. Xarunta Admission Yukreeniyaan
Fadlan booqo this page in la sameeyo codsiga online.
Fadlan ogow: luqadda Original ah "Xarunta Admission Yukreeniyaan" content waa English. luqado kale oo dhan waxaa sameeyey aad u raaxaynay, laakiin waxaa laga yaabaa in turjumaad qaldan
Ha iloobin inaad nagu dayataan in netrworks bulshada gunooyin lacag la'aan ah
gunooyin Free ee ardayda
warqad martiqaad diray
Baro daawada ee Ukraine
Qiimaha Ukraine ku nool
Maxaad waxbarasho ee Ukraine
koorsooyinka Business & Management
Visa by dalka
Ku soo DHAWOOW Ukraine
Kharashka ku nool Ukraine
visa Guud macluumaad
si ay u 1st June
dalabyo Gaarka ah ee gelitaanka ee Ukraine
Lviv waa magaalo gaar ah in which history, dhaqanka, maskax laba Caalamka - ka soobax iyo u Dhaeba - waxaa tolerantly biireen. Waxa xiiso leh in la ogaado in magaalada been ka fog siman ka Crimea (ama, gaar ah, magaaladii Theodosia), hore Dr Makumbe Kafa, iyo Venice. Sida iska cad, meesha juquraafi Lviv ee isgoyska dhaqamada caalamiga ah iyo ilbaxnimo ayaa saamayn ay jawi awaal ah. Inkastoo lagu xanuunsadaa badan keenay by dagaallo badan oo ka badan qarniyo dheer ee taariikhda Lviv ee, durkiya naqshadda magaalada ee ku hadhay dhowaad dhawrsan.
Lviv waa xarun weyn oo gobolka, Gumaysiga aagga of 155 sq. kiiloomitir. About 730,000 dadka sida joogtada ah ku nool Lviv. Inta badan dadka magaalada ayaa ka kooban yahay qowmiyadaha Ukraine, In kastoo beelaha kale sida polish ah, Yuhuudda, Gariigta, Jarmalka, Armenians, Russia, iwm. waxaa sidoo kale wakiil.
Lviv oo ah magaalomadaxda reer ardayda. About 150,000 ardayda barato in hay'adaha waxbarashada sare leh tiro balaadhan oo ah takhasuso. Sida laga soo xigtay doorashada opinion dadweynaha, Lviv waa magaalada labaad ee ugu caansan ee Ukraine ka dib markii ay magaalada - Kyiv. Laga bilaabo December 1998, qaybta dhexe ee magaalada waxaa ka mid ah dhaxalkooda dhaqanka iyo taariikhiga ah ee UNESCO. 20% dhammaan dalka durkiya naqshadda ku yaalaan Lviv.
Lviv waa museum ah hawada u furan and the embodiment of the Ukrainian culture and European charm, dhoob la ilaawi karin, iyo taxadiri gaarka ah ee naqshadaha, dhaqanka jir ah oo, hubaal, qaxwaha dhadhan in guryaha halyeeyga kafeega Lviv. Martidu waa la sixri karin by jawiga gaarka ah ee dejinta haybad difaacaneysa ee magaalada iyo hoteelada ulana Garaaci of habitants maxalliga ah.
Lviv waa magaaladii jaamacadaha jir badan, goobaha sayniska gaar ah oo archives, iyo maktabadaha iyo matxafyada caan. Waxaad marayso kartaa jidadka xasilloon oo ku saabsan, mar kasta oo ay ogaadeen wax cusub oo xiiso leh naftaada.
Admission 2018-2019 furan yahay hadda
Qiimaha livint ee Ukraine
Hel gunno bilaash ah
gunooyin free la yaabka leh ee ardayda our
na raaca iyo aad u hesho gunooyin lacag la'aan ah
Twitter by AdmissionCenter
Admission 2018-2019 furan oo ku jira Ukraine
Dhammaan ardayda ajnabiga ah waa lagu soo dhaweynayaa in ay bartaan in Ukraine. Waxaad ka codsan kartaa la Center Admission Ukraine.
Xafiiska Admission ee Ukraine
email: ukraine.admission.center@gmail.com Viber / Whatsapp:(+380)-68-811-08-39 Address: Nauki Avenue 40, 64, Kharkiv, Ukraine. DALBADO NOW
Xarunta Admission Ukraine waa urur rasmiga ah in la aasaasay si ay u caawiyaan ardayda ajinebiga ah la ogolaado iyo hanaanka waxbarasho ee jaamacadaha Ukraine.
Last update:22 Laga yaabaa 19
Copyright All Right Reserved 2018 Xarunta Admission Yukreeniyaan
Codso online	Xarunta Admission Global	Xiriirada & Support